Hevitra mandalo: resaky ny mpitsimpona akotry: tsy vitan’ny fandatsaham-bato fa fanehoana safidy mazava no tena adidy | NewsMada
Hevitra mandalo: resaky ny mpitsimpona akotry: tsy vitan’ny fandatsaham-bato fa fanehoana safidy mazava no tena adidy
Mbola tsy nisokatra ny fehi-potoanan’ny fampielezan-kevitra amin’ity fihodinana faharoa an’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika ity, dia efa nanomboka ny fanentanana ho an’ny fandatsahana vato fotsy, izany hoe tsy hisafidy ny iray amin’ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ireo mpilatsaka izay voatondron’ny vahoaka tamin’ny fihodinana voalohany afaka andray anjara amin’ny fihodinana faharoa. Toy ny horakoraky ny sahona ihany izany tsy hita ho sakanana fa ny tsiboboka ihany no tompon’ny rano. Na tsy dia mazava aza ny tena fonosin’izay fiteny izay, manamafy ny tsy fanomezana sehatra an’izay manana anjara mivantana eo amin’ny fifidianana ny fitsipika. Malalaka anefa ny safidy samy manana fahafahana anana ny heviny ary samy afaka manambara an’izay. Eo anefa misy maha samy hafa ny fanambaran-kevitra amin’ny fanentanam-bahoaka sy fandresen-dahatra ny mponina izay alaim-panahy isarihana azy hanaraka ny hevitry ny tena. Zo an’ny tsirairay na amin’ny fihodinana voalohany na faharoa ny fanehoana ny tsy fankatoavany na ny iray fotsiny aza amin’ireo mpilatsaka izany na amin’ ny fandatsahana vato fotsiny na amin’ny fanambarana an’izany ampahibemaso, fa tsy misy kosa anjaran-tsehatra voafaritry ny lalàna ahafahana manao fampielezan-kevitra ho an’izany safidy izany. Maika moa fa amin’izao fihodinana faharoa izao izay efa mazava fa ny maro an’isa dia efa nametraka safidy misongadina amin’ny fanomezana ny fitokisany amin’ny iray amin’izy roa lahy voatonona ireo. Ny safidin’ny maro no atao safidin’ny vahoaka ao anatin’ny rafitry ny demôkrasy, afaka no tsy hitovy hevitra amin’ny maro ny tena fa tsy manan-jo kosa anambanimbany ny vahoaka amin’ny filazana ny tsy fahaizany nifidy afa-tsy olona tsy mendrika.
Ny famporosihana ny olona hangilan-tsofina amin’ny fikasana asa sy fandaminana ny fanatanterahana azy ireo amin’ny tolotra ataon’ny mpilatsaka no tokony hiezahana mba ahafahana misafidy am-palalahana sy am-pahalalana, eo ankilan’izany mantsy ahiahiana ny fazahon’ny fakampanahy laka mikasika ny fifanaratsina mifamaly. Mitovy ny tombony isitrahan’ny roa tonta izay samy manana traikefa noho izy ireo samy efa teo amin’ny fitondrana tampony, mety misy lafy ratsiny anefa izany dia ny fahafahan’ny mpifidy mikaroka ny kilema izay nitranga tamin’
izany. Tsy afaka no tsy jerena ny farasisa mety mbola tavela na izany aza na miainga avy amin’izay aza, tsy fitsarana ny teo aloha no atao ankehitriny fa safidy momban’ny famonjena dieny rahampitso no sady mikasika ny fitsinjovana ny ho avy ao aoriana.